Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nwere vidiyo vidiyo ndị ị jirila ọtụtụ puku dollar, ị kwesịrị ị na-ebipụta vidiyo na YouTube iji nweta nsonaazụ ọchụchọ YouTube YouTube. dị nnọọ ijide n'aka na ị ebuli gị YouTube vidiyo mgbe ị na-eme. Nke ahụ kwuru, ịkwesighi itinye vidiyo YouTube na saịtị gị… maka ọtụtụ ihe kpatara ya:
Ọ gwụla ma i chefuru, ikekwe ị na-apụ vidiyo dị mkpa nke ndị asọmpi gị na ihe ọkpụkpọ YouTube gị! Were ya na ịga na saịtị gị, na-ele vidio gị, emesia egosiputara onye na-asọmpi gị dị ka ihe dị mkpa. Chei!
Egwuregwu vidio YouTube adịghị oke customizable… Mara vidiyo a n'okpuru ebe m nwere nhọrọ ole na ole ịhọrọ site na… na YouTube, pịa njikọ iji mepee na YouTube, Lelee mgbe e mesịrị na YouTube, Kekọrịta, ma ọ bụ pịa egwu. Emere ya niile maka YouTube kama akara gị. Kedu ihe kpatara na ọbụghị naanị onye ọkpụkpọ na - enweghị ọrụ ma na - arụ ọrụ?
Enwere m ike ịdụ gị ọdụ ka ị zere vidiyo nnabata na saịtị nke gị. Hostlọ ọrụ weebụ gị na-ahụkarị enweghị akụrụngwa iji mee ka ọtụtụ puku ndị ọbịa bịara na ntanetị. N'ezie, enwere ezigbo ohere na ị ga-agabiga n'ọnụ ụzọ mbata ma gbaa gị ụgwọ karịa. Ghaghi choro onye nlere vidiyo… obughi YouTube.
Swarmify na-enye azịza vidiyo vidiyo siri ike na ngwa ngwa maka weebụsaịtị gị. A bụ ihe nnyocha video:
CDN - Ha nwere uwa netwọk nnyefe ọdịnaya (CDN), nke pụtara na ọ dị obere oge dị n’etiti onye na-arịọ vidiyo na ebe a na-ekesa ya.
A bụ otu akụkụ-na-n'akụkụ tụnyere nke ọsọ:
Ọ bụrụ na nke ahụ ezughi, SmartVideo na-ewepụta vidiyo gị na YouTube na-akpaghị aka, debe ha ma chekwaa ha. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-edochi ihe ọkpụkpọ YouTube kpamkpam ma na-akwado vidiyo gị na netwọkụ nnyefe zuru ụwa ọnụ anyị ma na-eje ozi site na teknụzụ egwu egwu anyị.
Ngosipụta: Abụ m mmekọ maka Gbanwee SmartVideo.